Porsche ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ခွံ | Porsche စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများအတွက် China Key shell
Porsche သည် Key shell
Porsche Panamera အတွက် 5pcs /3ခလုတ်များ Smart Keyless Entry Remote Key Case Shell Shell Porsche Panamera macan cayenne
5pcs /3ခလုတ်များ Porsche Panamera အတွက် Smart Keyless Entry Remote Key Case Shell အခြေအနေ: 100% Brand New Color: အနက်ရောင် Key Blank: Yes Transponder Chip: အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ: အဘယ်သူမျှမအင်္ဂါရပ်များ: 1. ကျိုးသော့ခလုတ်များနှင့်အတူသော့ကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုး။ ဒါမှမဟုတ်ဝတ်ဆင်သော့ချက်ကိစ္စ။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။ (immobilizer / transpo ပါဝင်သည်)
Porsche 911 996 Boxster S 986 အတွက်ကားသော့အဖုံးအဖုံးအဝေးထိန်းခလုတ်အခွံအစားထိုးခလုတ် ၃ ခု
Porsche 911 996 Boxster S 986 အတွက်ကားသော့အိတ်မျက်နှာပြင်ကားအဝေးထိန်း Fob Key Case Shell Replacement3ခလုတ်အခြေအနေ ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ရုပ်ပုံပြသသည့်အတိုင်းခလုတ်များ - ခလုတ် ၃ ခုခလုတ်ဘေးပတ် ၀ န်းကျင် - ဟုတ်ကဲ့ Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - အလေးချိန်မရှိပါ : 35g Fitment: Porsche 911 Boxster နှင့်အခြားသူများအတွက်…အရေးကြီးမှတ်ချက် - ၁။ ဤအရာသည်အဝေးမှမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝေးလံသောသော့အခွံအခွံအစားထိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အတွင်းပိုင်း (အဝေးမှ / အီလက်ထရောနစ် / transponder ချစ်ပ်) ယူနစ်မရှိပါ။ 3.Ple ...
Porsche Cayenne အတွက် ၂/၃/၄ ခလုတ်လှန်ခြင်းဝေးလံသော Key shell fob case ကို 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Uncut HAA / HU66 blade
2/3/4 Porsche Cayenne 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Uncut HAA / HU66 blade အထူးသဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်လက်ကားရရှိနိုင်သည့် ၁၀၀% ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ခလုတ်ခလုတ်လှန်ခတ်ထူးခြားချက်များ - အရည်အသွေးမြင့်လက်ကားရရှိနိုင်မှု ၁၀၀% ကုန်ပစ္စည်းအသစ် Fit: Porsche Cayenne အတွက် ၂၀၀၄-၂၀၁၁ အသိမပေးခင်သတိပြုပါ ဖြေ - မင်းရဲ့သော့ကိုသေချာအောင်ငါတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ (circuit board / chip / battery) မပါ ၀ င်ပါ။ ဒါကအစားထိုး key shell ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရုံသော့ချက်သမားအားဖြင့်ဓါးဖြတ်ရ ...